Xiriirka kubbada cagta qaaradda Afrika ee (CAF) oo macaluusha ka jirta Soomaaliya ugu deeqay $200 oo kun oo dollar. – Radio Daljir
Xiriirka kubbada cagta qaaradda Afrika ee (CAF) oo macaluusha ka jirta Soomaaliya ugu deeqay $200 oo kun oo dollar.
Nijeria, Octobar 01 – Qoraal ka soo baxay xafiiska xariirka kubbada cagta qaaradda Africa ee (CAF) ayaa lagu shaaciyay in macaluusha daran ee ku fiday K/Soomaaliya uu xiriirku ugu deeqay dhaqaale gaaraya $200,000 oo dollar.
Deeqdaan ka timid xiriirka kubbada cagta qaaradda Africa ayaa ah tii ugu horraysay tan iyo markii abaartu ay macaluul u dillaacay abaarta ka jirta geeska Africa, waxaana qoraalkaan ka soo baxay xafiiska CAF lagu sheegay in xiriirku aad ugu xunyahay xaaladda macaluusha ka taagan geeska Africa, gaar ahaan Soomaaliya oo xiriirka CAF ugu deeqay $200 oo kun dollar.
Dhanka kale, xiriirka kubbada cagta adduunka ee FIFA ayaa horay dalka Soomaaliya ugu deeqay malaayiin dollar, si wax looga qabto macaluusha ku sii baahaysa ee ka jirta Soomaaliya.
Deeqdahaan kale duwan ee ka imaanaya bahda cayaaraha adduunka, ayaa ah kuwo isi soo tarayay muddooyinkii dambe, waxaana sidoo kale Soomaaliya dhawaan dhaqaale malaayiin ah ugu deeqay ciyaar-yahan Zidane ee u dhashay dalka Farance iyo ciyaaryahanka u dhashay dalka Brazil ee Ronaldo.
Radio Daljir, Garowe